Warranty / Service - Shenzhen Khazimla Technology Co., Ltd.
Uyabengezela zinika isekela ngokupheleleyo ukuze abathengi bethu pre-yentengiso nasemva-yokuthengisa. Ibonelela izixhobo ezininzi online ukuxhasa imigca yethu imveliso ezahlukeneyo. Ukukhangela icandelo Ukuxhasa uqhagamshelane nathi ukuba ukufumana ulwazi olufunekayo.
Iziqinisekiso, Plans Service and yokulungisa
Uyabengezela inika inkxaso enkulu, babonise ikhanya kunye nokusebenza ngokukuko. Ukubonelela izinga eliphezulu lenkonzo, Khazimla wenza oko thina.
siqinisekiso Industry-yezikhokhelo eqhelekileyo kunye iimveliso Thokoza LED.
Izicwangciso Service Product
Suite of iziqinisekiso elongeziweyo ukuhlangabezana neemfuno zakho. NgokuTyala nesiCwangciso Planar Service ukuba uzikhusele imali kunye downtimes ixesha elide.
Ukufikelela kumsebenzi womnatha Khazimla ngayo kwihlabathi amagcisa abazinikeleyo abaqeqeshelwe ukuqinisekisa kwindlela yakho ifakiwe, zinokulungiswa nemigangatho kangangoko.
Iinkonzo Repair ophile i khetho ukuba imveliso yakho ngaphandle iwaranti kunye ezineziphene.
Halala ngokuthenga kwakho kwe Khazimla LED ividiyo eludongeni! Emiswa olufanelekileyo, isicwangciso kunye nokhathalelo, kufuneka ube neminyaka emininzi zikumfanekiso wobunjani nanto, ukuthembeka kunye nokusebenza.
La magama alandelayo kunye nemiqathango ye-Standard Limited Warranty amele imvumelwano phakathi kwethu, umenzi we imveliso yevidiyo eludongeni LED (Shenzhen Khazimla Technology Co., Ltd "Thokoza") kunye nawe, umthengi othenge Khazimla LED imveliso udonga imidlalo yokuzonwabisa ngqo ukusuka Thokoza okanye zokusasaza Thokoza eligunyazisiweyo okanye kumthengisi. Isiqinisekiso Standard Limited inikwa simahla kunye kuthengwe imveliso enophahla evela iintsapho zilandelayo: Khazimla LED video ibonisa eludongeni.
Isiqinisekiso Standard Limited isebenza kwiimveliso abagubungela Thokoza ezithengwe ngomhla okanye emva komhla wokuqalisa kuqatshelwe ngezantsi. Uyabengezela balibambile ilungelo lokutshintsha ngokwalo kweziqinisekiso. Ezo nguqu ziya kusebenza iimveliso abagubungela Thokoza ezithengwe ngomhla okanye emva komhla wokuqalisa ngokwewaranti ehlaziyiweyo.
• ukhuseleko nyaka-2 ukusuka iziphene izinto nokusetyenzwa
• ukuthunyelwa phambili iindawo indawo okanye iimveliso (ngaphandle iithayile LED)
• Ukufikelela 24x7 likaxakeka inkxaso phone
Uyabengezela kuyimfuneko iimveliso zayo lokukhululeka kulimala eziphathekayo nokusetyenzwa ngexesha Isiqiniseko ngezantsi. Ukuba, ukuzimisela kwethu, imveliso abonisa ukuba sinesiphene eziphathekayo okanye umsebenzi ngexesha sesiqinisekiso, siya alungise okanye indawo inxalenye nesiphene kunye yinxalenye omtsha okanye ihlaziyiwe efanayo. Ukuba umba uthathwa enesiphene lemveliso kunye imveliso LED, siya alungise okanye indawo inxalenye ophosakeleyo ngokokubona yethu. Ukuba ukulungiswa okanye ukutshintshwa inxalenye okanye imveliso ixhomekeke kuthi ukuba alunakwenzeka ngokorhwebo, siya ukubuyisela nesabelo okulinganiswa yexabiso lentengo (kubalwa ngokususela nentshiyekela isiqinisekiso kunye MSRP1 ngoko-yangoku efanayo okanye imveliso efanayo).
Kulo Ixesha iwaranti, siya ukugcina endaweni amacandelo isiphene simahla, ukuba ingxaki bobabo kuthi. Kodwa kufuneka ahlawule zombini iintlawulo ukuthunyelwa.
Emva kweminyaka emi-2, siye Ndiyakuthethela kuphela iindleko eziphathekayo, kufuneka ibe noxanduva ukuthunyelwa.
Yonke imveliso ividiyo eludongeni eLED nesiqiniseko iminyaka emibini ukususela kumhla ezivela Thokoza. Zonke izincedisi Field Units replaceable (FRUs), kubandakanywa kodwa kungaphelelanga iintambo, okude, izinto amandla kunye neebhodi isilawuli, iithayile LED, ezithengwe ngexesha yentengo yokuqala imveliso ziye nesiqiniseko iminyaka emithathu ukususela kumhla ezivela Thokoza. Zonke izincedisi FRUs ezithengwe emva ukuthenga lokuqala imveliso ziye nesiqiniseko iintsuku ezingama-90 ukususela kumhla ezivela Thokoza.
Isiqinisekiso Standard Limited iquka imveliso obuthengiweyo kumthengisi okanye umhambisi Thokoza okanye Thokoza ogunyazisiweyo kwaye isebenza kuphela ukuba umthengi original othenge imveliso egqubuthele. Kumthengisi okanye umhambisi zingaqhagamshelana Support Technical egameni lakho xa unokuthi yomonakalo imveliso. Le waranti ngeke wayidlulisela. Uyakulindeleka ukuba zinike ubungqina bokuthenga.
Isiqinisekiso Standard Limited ayibandakanyi okanye anqongophele ngenxa oku kulandelayo:
1. Products na ukuthengwa evela umhambisi Thokoza egunyazisiweyo Thokoza okanye okanye kumthengisi.
2. Labour okanye zokuhamba iindleko ukuze ukufakwa, umise-up, ukulungiswa, ukulungiswa ukubonisa izicwangciso, ukususwa, kwakhona ufakelo-okanye ezinye iindleko zabasebenzi ezenziwe ngumthengi.
ixesha lokubeleka 3. zokuthunyelwa kunye nokufumaneka zisenokwahluka ngokusekelwe imvelaphi nendawo. Asikwazi ukuba banikele PO Box kunye Apo / iidilesi FPO Box.
4. Iindleko Rental ezenziwe ngumthengi.
5. Nasiphi na imveliso leyo ethe arhoqozwe inani lothotho, silungiswe okanye zisuswe.
6. Product okuye lithengiswe, zigqithiswe ayiqeshileyo, oqeshiweyo, ilahlekile, ibiwe okanye elahliweyo.
7. Nayiphi software, kubandakanywa kodwa kungaphelelwanga kwindlela yokusebenza.
8. Ukonakala, ukonakala okanye ukungasebenzi evela:
A. Accident, ukuxhatshazwa, kakubi, ukungahoywa, umoya ngokungafanelekanga & ukupholisa, umlilo, amanzi, intlekele, umbane okanye ezinye izenzo ngokwemvelo, sesichengeni umsi (isigarethi okanye ngenye indlela), ukuguqulwa imveliso engagunyaziswanga (kuquka ukusetyenziswa kwe-yentaba engagunyaziswanga), okanye ukusilela ukulandela imiyalelo kubonelelwa ngayo imveliso.
B. Repair, okanye ukuzama ukulungisa, nguye nabani na ngaphandle Thokoza.
C. Nawuphi na umonakalo imveliso ngexesha okanye ngenxa ziyhunyelwe.
D. Nawuphi na umonakalo ngexesha lofakelo, ukususwa, disassembly kunye reassembly lemveliso yi ngumthengi.
E. Ibangela yeyangaphandle imveliso, ezifana ukuhla kwamandla ombane okanye ukusilela.
F. Ukusebenzisa izinto okanye amalungu ukuhlangabezana iinkcukacha Khazimla 's.
G. wear kwesiqhelo ndiyaqwenga eqhelekileyo kwinqanaba pixel ukuwa-out ezinxulumene netywina entle zobuchwepheshe LED.
H. Customer yabangela iziphene, kubandakanywa kodwa kungaphelelwanga LED ezimashakeleyo okubangelwa betha emphethweni okanye besonwaya ecaleni ngaphambili.
I. Nayiphi non-efanayo zibangelwa ixesha elide 24/7 ukusebenza eludongeni wevidiyo kunye kakhulu nokuchasanisa isiqulatho static.
J. Ukungaphumeleli ukulandela inkqubo yesondlo njengoko kuchaziwe Guide User imveliso apho ishedyuli ucaciselwe ulondolozo rhoqo mveliso.
K. Nayiphi na isizathu akazalani unesiphene eziphathekayo okanye kubuchwepheshe.
L. yokuyisebenzisa umboniso ngaphandle iimeko ezicetyiswayo nokusetyenziswa eziqhelekileyo lowu User Guide.
M. Software okanye ukungasebenzi into.
Ingxubevange Return Issues
1. akayi kwamkela imveliso wabuya.
2. Ukuba imveliso ziziphene uyabuyiselwa kwaye sizimisele ukuba bashiywe iwaranti phantsi nayiphi kwezi ukungafakwa ezidweliswe ngasentla, sinelungelo ukungakuhlawulisi umthengi imali ukuba ingagqithi MSRP.
3. Ukuba imveliso ibuyiswa kwaye uzimisele ukuba iyunithi Akukho nantlondi imbi (NFF), sinelungelo lokuba invoyisi umthengi ngazo naziphi na iindleko ezenziwe Thokoza.
4. Luxanduva umthengi ukuba uyiphakheja kakuhle imveliso zonakeleyo vaka kwidilesi enikezelwe yi ummeli Service Customer kunye nenani RMA liboniswe ngokucacileyo. Ukuba Product alusebenzi akukho elungiswe ngokufanelekileyo kwaye yonakele ethunyelwayo ngexesha ukubuyela Thokoza, umthengi uya kuhlawuliswa nokuba iindleko ukulungiswa, ukuba repairable, okanye MSRP imveliso replacement.
5. iindawo Replacement okanye imveliso sizakucinga intsalela iwaranti imveliso yokuqala okanye iintsuku ezingama-90 ukususela kumhla zimpahla, nayiphi na ixesha elide.
6. Umthengi uyavuma ukugcina inxalenye replacement okanye imveliso eyenziwa yinzwana ukuba inxalenye sasinesiphene babuya okanye imveliso iba impahla Thokoza.
Isiphumo Law Local
Isiqinisekiso Standard Limited ukunika amalungelo athile omthetho, kwaye kungenzeka ukuba amanye amalungelo oko kunokuhluka endaweni leso. Ezinye iindawo musa ukuvumela esiyifunayo iziqinisekiso pahaha okanye musa ukuvumela ngaphandle okuyingozi okanye esisiphumo, ngoko umda ngentla bucala angafaka isicelo kuwe.